महोत्तरीका अनिललाई कतारमा गोली हानेर मृत्युदण्ड दिइयो, यस्तो थियो उनको अपराध ! «
महोत्तरीका अनिललाई कतारमा गोली हानेर मृत्युदण्ड दिइयो, यस्तो थियो उनको अपराध !
Published : 21 May, 2020 2:00 pm
कतारमा महोत्तरीको औराही नगरपालिका–१ का अनिल चौधरीलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कतार पुगेका चाधरीलाई गोली हानेर मृत्युदण्ड दिइएको हो ।कतारमा नेपाली नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिएको यो पहिलो घटना हो । कतारी नागरिक उमैर मोहम्मद उमैर अल रमाजानी अल–नुयमीको हत्या गरेको ठहर गर्दै चौधरीलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको थियो ।
तल्लो अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पनि अनुमोदन गरेपछि जेल प्रशासनले मृत्युदण्डलाई कार्यान्वयन गरेको हो । उनलाई माफी दिनको लागि पीडित परिवारले अस्वीकार गरेको थियो । मृत्युदण्डको कार्यान्वयन गर्नु एकदिन अगाडि मात्रै कतारले नेपाली दूतावासलाई जानकारी दिइएको थियो । सूचना पाएलगत्तै दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मृत्युदण्डको कार्यान्वयन रोक्नका लागि पत्र पठाएको थियो ।
चौधरीले कतारी नागरिक अल नुएमीलाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । उनले नुएमीमाथि दर्जनौं पटक खुकुरी प्रहार गरेको उल्लेख छ ।
हत्या गरेको अभियोगमा उनलाई सन् २०१७ अप्रिलको पहिलो हप्ता पक्राउ परेका थिए । उनको शव स्थानीय अस्पतालमा राखिएको छ । उनको शवलाई नेपाल पठाउनको लागि कतारी प्रशासनले अनुमति दिएको छ । चौधरी २०१५ अगष्ट २७ गते कतार गएका थिए । उनी कार धुने कम्पनीमा सामान्य मजदुरको हैसियतमा काम गर्थे ।
लकडाउन जेठ ३२ सम्म, सेना परिचालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनलाई
पछिल्लो २४ घन्टामा थप १८९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १४०१ पुग्यो
पछिल्लो २४ घन्टामा थप १८९ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
बिहानै मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि आज मिति २०७७ साल जेठ १७ गते शनिबारको राशिफल पढ्नुहोस् !
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) सबारी साधनको प्रयोमा बिशेष
अनन्त: बिदेशमा भएका नेपालीलाइ नेपाल फर्काउने सरकारको घोषणा, यी सुचिमा पर्ने नेपालीलाई सरकारले अब नेपाल ल्याउने !
सरकारले कोभिड–१९ को असहज परिस्थितिमा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने भएको छ । आज
थप १८९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १४०१ पुग्यो !
थप १८९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १४०१
पछिल्लो २४ घन्टामा थप १८९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,
बिहानै मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि आज मिति २०७७ साल